Kenya: 2 ku dhimtay weerar lagu qaaday Jaamacadda Mombasa – Kasmo Newspaper
Kenya: 2 ku dhimtay weerar lagu qaaday Jaamacadda Mombasa
Updated - October 10, 2017 6:14 pm GMT
London (Kasmo),Dablay ka kooban 10 xubnood ayaa rasaas ku furay saaka Bas iyo gaari yar oo siday araday iyo shaqaale ku sii jeeda “Campus”-ka Jaamacadda “Mombasa Technical University” , sida Wakaaladda Reuters warisay maanta.
Mas’uulinta kenya ayaan wali garanayn haybta kooxdaas oo 2 ka mid ah shaqaalaha dilay, 3 kale oo 2 askar tahayna ku dhaawacay, laakiin waxay tuhunsanyihiin kooxda Al-Shabaabta Soomaaliya oo si gaar ah uga qawlaysata dhulka xeebta ah, oo ay ciidammana ka qortaan.
Ma noqonayso markii u horreysay oo Al-Shabaab weerarto goobaha waxbarashada Kenya, 12kii April 2015kii waxay galeen Jaamacadda Garissa, halkaas oo ay ku dileen 147 arday u badnaa.
Weerarrada Al-Shabaab ka sokow, xasilloonida Kenya waxaa halis ku haya fowdada la xiriirta siyaasadda oo in kasta oo dalku, 2010kii qaatay Dastuur cusub, wali la lagdamayo musuqmaasuqa, nabadgalyo iyo dhaqaale xumada.
Guushii markii 2aad ee Madaxweyne Kenyatta, doorashadii 8dii Agosto, waxaa nasakhday Maxkamadda Sare ee dalka, taas oo go’aamisay in doorashooyin ku-celis ah la qabto 26ka Obtoobar. Ilaa xilligaas, ugu yaraan 37 qofood oo 3 ka mid ah carruur yihiin, ayaa ku geeriyooday rabshado dhacay.
Guddiga Xuquuqda Kenya ayaa sheegay dadka dhintay qaarkood in ay haleeshay rasaasta Boliiska, laakiin waxaa beeniyay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Fred Mattiangi. Doorashooyinkii dhacay 2008dii, dad gaaraya 1,100 qofood ayaa ku naf waayay, in ka badan 650,000 oo qofoodna waxay ka carareen guryahoodii, nabadgalyo xumo darteed.